ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याको बिषयमा बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! - Nepali News Nepal
ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याको बिषयमा बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद !
जुलाई 16, 2020 जुलाई 16, 2020 Bishwa Ghatana0Comments अयोध्या, ठोरी, प्रधानमन्त्री, माडी
१ साउन २०७७ काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या र भगवान् श्रीरामको जन्मस्थानका ’boutमा दिएको अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अयोध्या’bout प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन र कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउने आशय थिएन’ भनरे स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ ।
‘विसं. २०३४ सालअघि ठोरी चितवन जिल्लामै अवस्थित थियो । जुनबेला ठोरी र माडीलाई पर्यायवाचीकै रूपमा लिने गरिन्थ्यो । सरकारी कामकाज पनि माडीबाटै हुने गथ्र्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ठोरीमा रहेको सीता गुफालगायत राम–सीतासँग जोडिएका थुप्रै धार्मिक स्थलहरू ठोरी–माडीकै आसपासको क्षेत्रमा छन् । सोमेश्वर पहाडको किनारामा सीता गुफा अवस्थित छ । सोही पहाडको पश्चिमतर्फ माडीमा अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी समेत छ । वाल्मीकि आश्रम पनि माडीमा अवस्थित छ । यी सबै धार्मिक क्षेत्र सोमेश्वर पहाडकै आसपासका क्षेत्रमा छन् । त्यसैले यसैलाई प्रमाणमा रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कुरालाई भोलिका दिनमा खोज अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यसको इतिहासविद् र अनुसन्धानकर्ताले काम अघिबढाउनु पर्छ ।’
सीता गुफा पौराणिक तथा ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल भए पनि अधिकांश मानिसहरूलाई यसको महत्वका ’boutमा जानकारी नै छैन
भगवान् रामको तपस्या गर्ने पवित्रस्थलको रूपमा सीताले यसै गुफालाई प्रयोग गरेकी थिइन् । गुफा ’roundका चारैतिर हरियाली, दुई खोलाको संगम स्थल, मनोरम दृश्यमा रम्दै सीताले गर्भवती हुँदा महिलामा हुने प्रसव पीडा भुल्ने गरेको जनविश्वास छ ।
सीता गुफा पौराणिक तथा ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल भए पनि अधिकांश मानिसहरूलाई यसको महत्वका ’boutमा जानकारी नै छैन ।
माडीले थाल्यो अयोध्या’bout छलफल
प्रधानमन्त्रीले अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी नेपालमै भएको अभिव्यक्ति दिएपछि चितवनको माडी नगरपालिकाले यस’bout छलफल नै सुरु गरिसकेको छ ।
माडीका नगरप्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले भने, ‘माडीमा अवस्थित साविकको अयोध्यापुरी गाविसको वडा नम्बर ६ मा अयोध्या भन्‍ने ठाउँ नै रहेछ । राम यहीँ जन्मेको आधारमा सो ठाउँको नाम अयोध्यापुरी राखिएको रहेछ । त्यसैले अब यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने सोचेर छलफललाई अघि बढाएको छु । केही व्यक्तिहरूले यहाँको धार्मिक महत्व र यस विषयसँग जोडिएका कृतिहरू नै प्रकाशित गरिसक्नु भएको अवस्था पनि हो । त्यसैले यस विषयको ज्ञाताको रूपमा रहेका पण्डितहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल अघि बढाएको हुँ । उहाँहरूले पनि अयोध्या’bout पुष्टि गर्ने धेरै तथ्यहरू’bout मलाई सेयर गर्नुभएको छ ।’
माडीकै वडा नम्बर १ मा वाल्मीकि आश्रम छ । ठोरी–माडी क्षेत्रमा अयोध्या भएको प्रसङ्ग पनि मिल्ने उनले बताए । उनले भने, ‘वाल्मीकि आश्रममा सीता बसेको, लव–कुशले खेलेको धार्मिक र ऐतिहासिक प्रमाण छ । वाल्मीकि आश्रम त विश्वकै हिन्दुका लागि पवित्र धार्मिकस्थल पनि हो । अयोध्यापुरीबाट वाल्मीकि आश्रममा सीता आएको प्रसङ्ग तर्कसङ्गत पनि देखिन्छ । तैपनि यस ’boutमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
← सप्तरीमा युवकको हत्या, ७ पक्राउ
बागचौर बजारमा रहेको बैंक अगाडि संकास्पद बस्तु फेला →